မန္တလေး အလုပ်အကိုင် ပြပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီကြီး ၂၅ ခုမှ အလုပ်အကိုင် ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလို အပ်လျက်ရှိသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ မန္တလေးအလုပ်အကိုင်ပြပွဲကြီးကို JobNet. com.mm ကဦးဆောင်၍ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က မန္တလေးဘူတာကြီးအပေါ်ထပ်ရှိ ဟိုတယ်မာဘယ်လ်တွင် ပြုလုပ်ရာမြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီး ၂၅ ခုမှ အလုပ်အကိုင် ၈ဝဝ ကျော်ကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့ဆိုရင် ဝက်ဆိုက်ဘ်ကနေ တစ်ဆင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းခေါ်ယူမှုက တစ်နေ့ကို ၂၅ဝ ကျော်ရှိနေတာကြောင့် အခုလိုမျိုးအလုပ်အကိုင်ပြပွဲကြီးကို ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီနေ့ပွဲမှာပဲ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၂၅ဝ ကို ချက်ချင်းအင်တာဗျူး ဖြေဆိုပြီး ခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ပြ ပွဲတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ပြပွဲကိုမလာရောက် နိုင်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ကျွန်တော်တုိ့ရဲ့ဝက်ဆိုက်ဘ်ကနေလည်း သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက်ခေါ်ယူနေတဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကို ကုမ္ပဏီ တွေကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်”ဟု Job Net.com.mm ၏မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ Mr,Matt Deluca ကပြော ကြားသည်။
အဆိုပါ ပြပွဲတွင်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများ၊ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်များအစရှိသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဝင်ရောက်ပြသခဲ့ရာ အလုပ်အကိုင်လာရောက်ရှာဖွေသူများကို အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်များကို one Stop Service ဖြင့်အခမဲ့ချက်ချင်းထုတ်ပေးခဲ့သည့်အပြင် အင်တာဗျူးအခန်းငယ်များကို စီစဉ်ပေးထားသော ကြောင့် အလုပ်ခေါ်လိုသူကုမ္ပဏီများက ချက်ချင်းအင်တာဗျူးကာ အလုပ်ခန့်ထားပေးခဲ့ပြီး ပြပွဲသို့အလုပ် အကိုင်ရှာဖွေသူ စုစုပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော်တက်ရောက်လာ ကြသည်။ Job Net.com.mm သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နံပါတ်(၁) ရပ်တည် နေသည့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ဝက်ဆိုက်ဘ်တစ်ခုဖြစ်ရာ ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တို့ကဲ့သို့ပင် တခြားမြို့ကြီးများတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်ပြပွဲများကို ဆက်လက်ကျင်းပသွားရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။